Zvemagetsi indasitiri | Jiangsu Kaichuang International Trade Co, Ltd.
Mota ndiyo yakajairika nzira yekufambisa munyika. Chinhu chikuru chekuvaka chinoshandiswa mumotokari ndiyo simbi isingadhuri. Nekudaro, iyo indasitiri yemotokari painotanga kutarisa zvakanyanya uye nekuwedzera pamusoro pekushanda kwemafuta, kudzikisira kabhoni dhayokisaidhi uye dhizaini, aluminium iri kutamba chinzvimbo mumotokari dzazvino. Basa rinowedzera kukosha. mu2014, indasitiri yemotokari yepasirese (kusanganisa China) yakadya matani mamirioni 2.87 ealuminium. Pakazosvika 2020, China inotarisirwa kutora matani mamirioni 4.49 ealuminium pagore. Zvinhu zvakakosha zvekukura uku zvinosanganisira kukwira kwekugadzirwa kwemotokari uye kushandiswa kwakapararira kwealuminium mumotokari dzazvino. Pamakirogiramu ega ega ealuminium anoshandiswa mumotokari, huremu hwese hunoderedzwa nekirogiramu imwe. Nechikonzero ichi, kuwedzera kwenhamba yemotokari zvikamu zvakagadzirwa nealuminium: injini ma radiator, mavhiri, mabhomba, zvinomiswa. Injini dzinovharira, kutumira uye nhengo dzemuviri: hoods, madhoo uye kunyange mafuremu. Nekuda kweizvozvo, mugove wealuminiumeri muavhareji yakawandisa mota huremu yanga ichiwedzera kubva kuma1970: kubva kuma1970s kusvika kuma1970, mugove wealuminium muavhareji yakakurisa huremu hwemotokari yanga ichiwedzera: kubva kuma1970s kusvika kuma1970, iyo mugove wealuminium muvhareji gross yemotokari huremu hwave kuwedzera: kubva kuma1970s kusvika kuma1970, mugove wealuminium muavhareji gross yemotokari huremu hwave uchiwedzera: kubva kuma1970s kusvika kuma1970, mugove wealuminiumeri muavhareji yakazara mota kurema kwave kuri kuwedzera. 35 kilograms kusvika 152 kilograms nhasi. Nyanzvi dzinofungidzira kuti kusvika muna 2025, avhareji mota ichave iine 250 kilograms yealuminium.
Kubva ipapo, aruminiyamu yave kiyi yekugadzira yekushandisa yeindasitiri yemuchadenga. Kuumbwa kwealuminium alloys anoshandiswa mundiza kwachinja uye ndege dzave nani, asi chinangwa chikuru chevanogadzira ndege chinoramba chakangofanana: kuvaka ndege iri seyakajeka sezvinobvira, iine huwandu hwakanyanya kugona, ichishandisa peturu shoma sezvinobvira uye nemuviri usina ngura. ndege iri yakapfava sezvinobvira, ine huwandu hwakanyanya hunokwanisika, inoshandisa peturu shoma sezvinobvira uye haina ngura pamuviri. Iyo aluminium iyo inobvumidza mainjiniya eAironautical kurova zvese izvi zvinangwa. Aluminium inoshandiswa kwese kwese kwendege dzazvino: mune iyo fuselage, mune trim, mumapapiro emapapiro uye ma rudders, mune yekudzivirira masisitimu, mune yekuzadza ducts, mumatombo ezvivharo, Refueling hoses, mumikova nepasi, mune mafuremu ezvigaro zvemutyairi uye zvevapfuuri, mumafuru emafuta, mu hydraulic system, mumakoramu emukati eimba, muBhora mabheyaringi anoshandiswa muzviridzwa zvejongwe, injini dzemagetsi nedzimwe nzvimbo zhinji. Aruminiyamu alloys anonyanya kushandiswa kumuchina weaerospace ndeye 2ххххххххххххххххххх. 2xxx yakateedzana inokurudzirwa kune 7xxx alloys anoshandiswa kune akakurisa zvinhu munzvimbo dzakadzika tembiricha uye kune mafomu panodiwa ma voltages akakwirira. 3xxx, 5xxx uye 6xxx alloys anoshandiswa kune yakaderera-mutoro zvikamu, pamwe neayo hydraulic, oiri uye gasi mafomu. Lubrication uye mafuta masisitimu. Iyo inonyanya kushandiswa chiwanikwa ndeye 7075, iyo ine aluminium, zinc, magnesium uye mhangura. Ndiyo yakasimba pane ese maaluminium alloys uye vanokwikwidza simbi mune izvi, asi inongova chetatu chete huremu hwesimbi.
Aluminium yaimboshandiswa yemitumbi yemota yekutanga. Nekuda kweizvozvo, yekutanga mota inogadzirwa nemasaini ine muviri wese-aruminiyamu yaive Audi A8, iyo yakatanga muna 1994. Dzimwe mhando dzemhando yepamusoro dzakatevera munguva pfupi: BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Land Rover, Jaguar. 2014 muindasitiri yemotokari. Rimwe danho rinokosha, mota yealuminium yese yakaburitswa pachikamu chemusika wakakura: iyi ndiyo ichangoburwa itoriki yeFord - iyo "Ford". 150, rori yekuAmerica inonyanya kuzivikanwa makore makumi matatu nemasere apfuura. Nekuchinjira kune ese-aluminium dhizaini, iyi iri 315 makirogiramu akareruka kupfuura ayo akaitangira, ayo anoipa zviri nani mafuta hupfumi uye yakaderera CO2 emissions. Nhumbi inokwenenzverwa yakagadziriswazve, uye iyo modhi ine nani kumhanyisa uye braking hunhu. Panguva imwecheteyo, iyo NHTSA yakapa mota kuvimbika kwayo kwepamusoro, nyeredzi shanu pachinzvimbo chenyeredzi ina dzakapihwa modhi yapfuura.
Iyo Tesla yekuwedzera chengetedzo ine matatu nhanho. Chikamu chekutanga idanda rakagadzirwa nealuminium rinokanda chero chinhu chinorohwa nemotokari mumugwagwa uye chinobata kukanganisa. Chikamu chechipiri iplate yetitanium inochengetedza nzvimbo dzakatetepa kumberi kwemotokari, uye iyo yechitatu chikamu chakadhonzwa chealuminium chinodzora Iyo Simba inodedera uye inobata mota kumusoro uye pamusoro pezvipingamupinyi zvakasimba, zvisingazungunuke.
Aluminium ine chimwe chinhu chinonyanya kubatsira: chakanakira kutora zvinokatyamadza: kutaura zvazviri, zvakapetwa zvakapetwa kaviri simbi simbi. Neichi chikonzero, vagadziri vemota vagara vachishandisa aluminium mumabumpers avo. Pazasi peiyi shanduko yemotokari yemagetsi yeTesla yakafukidzwa ne8mm bullet-proof aluminium mapaneru ayo anochengetedza mupanda webhatiri pane kumhanya kwepamusoro. Yakavimbiswa kuchengetedzeka pa200 km. Munguva pfupi yapfuura, kambani yakatanga kuisa nyowani aluminium-titanium nhumbi dzokurwa pamotokari dzayo, izvo zvinobvumidza mutyairi, achiri mukutonga zvizere nemotokari, kupwanya kongiri nesimbi zvipingaidzo mumugwagwa. Chimwe chikonzero nei miviri yealuminium yakachengeteka kupfuura miviri yesimbi ndeyekuti kana chikamu chealuminium chakakombama kana kuora, iko kushomeka kunogumira kune kukanganisa yenzvimbo iyi, apo muviri wese unoramba uri muchimiro chawo chekutanga kuti uve nechokwadi chekuchengetedzeka kwekamuri revapfuuri. Nyanzvi dzinotaura kuti mumakore gumi anotevera, vagadziri vemotokari vanowedzera zvakanyanya kushandiswa kwealuminium mumamodheru avo. Huru yakawanda yealuminium inozoshandiswa kune nhengo dzemuviri uye yakazara mota yemitumbi ichagadzirwa nealuminium. Panguva imwecheteyo, vagadziri vemotokari vazhinji varikutaurirana nevagadziri vealuminium kuti vagadzire zvivakwa zvekuvharika-zvivakwa uko nyowani aluminium Mota zvikamu zvinogadzirwa kubva kune zvakashandiswazve aluminium zvikamu kubva kumotokari dzakaraswa. Zvakaoma kufungidzira imwe nharaunda inoshamwaridzika nzira yekugadzira kupfuura iyi.
Yakachipa Aluminium Sheets, Tsika Plate Aluminium Sheets, Anodized Aluminium Sheet Metal Vanopa, 7050 aluminium pepa, aluminium alloy 6061 mutengo, aruminiyamu yakarongedzwa pepa mutengo,